Magacaabistii, Melafsigii Iyo Xil Ka Maroojintii Boobe: Saddex aan wada socon ~ Qormadii 18aad | Somaliland Post
Magacaabistii, Melafsigii Iyo Xil Ka Maroojintii Boobe: Saddex aan wada socon ~ Qormadii 18aad
Qormadii hore waxaan idiinku sheegay in xatooyadii iyo musuq maasuqii aan xuduuda lahayn ee ka dhacay wasaaradda warfaafinta mudadii koobnayd ee uu wasiir Boobe wasiirka ka ahaa. Ay sababeen in madaxtooyada iyo xukuumada inteeda kale oo dhami ka aamin baxaan wasaaraddii warfaafinta iyo madaxdeedba. Markaas ka dibna waxaa dhacday in wax kasta oo wasaaradda warfaafintu soo dalbato in loo iibiyo loo diro cid kale oo aan wasaaradda ka tirsanayn. Maadaama ay Boobe iyo intii la midka ahayd wasaaraddii warfaafinta iyo madaxdeediiba ka dhigeen qaar aan waxba lgu aamini Karin. Arintaasina ay ahayd tii horseeday in Madaxtooydu u igmato Maareeyha Guud ee Wakaaladda Biyaha Hargeysa, in uu wasaaradda warfaafintaa u soo iibiyo mishiinkii laydhka iyo qalabkii kale ee Boobe lacagtooda weydiistay.
Hadaba iyada oo aynu qormooyinkeena dambe ku ogaan doono lacagtii ku baxday soo iibinta mishiinkaas iyo alaabtii kale ee la socotayba inta ay noqotay. Iyada oo aan weliba idiin sii sheegayo in ay jireen fadeexado waaweyn oo wasiir Boobe iyo madaxda kale ee warfaafintaba arintaas ka soo wajahay. Kuwaas oo aan iyaga laftoodana idiin ballanqaadayo in aad qormooyinka dambe kaga bogan doontaan. Ayaa maanta waxaan door biday in aan idiin sii wado. Sheekadii aan qormadii 16aad idinku badh jaray ee ku saabsanayd. Hadalladii uu ninku sida qarsoodiga ah nooga duubay, habeenkii aanu lixda Agaasime ku wada fadhinay. Hadaba sidii aan horeba idiinku soo sheegayba ninkaasi hadalkii iyo sheekadii uu habeenkaas naga duubay oo dhan waxa uu subaxnimadiiba farta ka saaray Wasiir Boobe. Taasina waxa ay noo cadaysay inuu ninkaas odayga ahi markiisa horeba ahaa nin uu wasiirku nagu dhex darsaday.
Si kastaba ha ahaatee isla subaxnimadii uu ninkaasi wasiirka u gudbiyey hadalkii uu naga soo duubay. Ayaa waxa kale oo dhacday in Wargeys ka mid ah wargeysyada madaxa banaan ee ka soo baxa caasimadu uu soo qoray war uu cinwaankiisu ahaa “Wasiir Boobe oo hor joogsaday baadhis Hantidhawrku ka wadey Wasaaradda Warfaafinta iyo Afar Agaasime oo nidar ku maray in ay is casili doonaan”
Bal hadda waxaad malaysaan ninkii Boobe oo ay labadaas arimood ku kulmeen waxa uu samayn doono. Runtii waa arin adag oo aanay suurto-gal ahayn in aad si hawl yar u malayn kartaan. Waxaase malayn kara oo keliya qofkii Boobe iyo dabeecadiisa si fiican u yaqaana oo qudha. Sidaa darteed waxba yaan idinku daalin arintaas malaynteeda iyo ka fekerkeeda’e aan idiin bilaabo sidii wax u dhaceen.
Waxay ahayd subaxnimo Sabti ah oo ay taariikhdu ahayd 04. 08. 2012. Anigu maadaama aan sida caadiga habeenkii shaqeeyo. Subaxaas hurdada ayaan ku yara raagay, oo waxa aan toosay saacadu markii ay ahayd abaaro 8:30 aroornimo. Dabadeedna markii ugu horeysay ee aan indhaha kala qaadayba, waxaan gacanta la tiigsaday Telefoonkaygii gacanta. Kaas oo aan doonayey in aan saacadda ka eegto. Hase ahaatee waxaan markiiba shaashadii telefoonka ku arkay in sadex jeer la I soo wacay intii aan hurday. Hadaan sii eegy numbarada I soo wacay ee aan seegay kuwa ay yihiina. Waxaan arkay in sadexda jeerba uu qof qudhi I soo wacay, hal number oo keliyana uu iga soo wacay sadexda goorba. Isla mar ahaantaa waxaan si fiican u gartay numbarkii la iga soo wacay iyo qofkii numbarka lahaaba. Qofka sadexda jeer ee kala duwan I soo garaacay ma aha qof kale, ee waa wasiirkaygii, waa wasiirkii wasaaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ee aan ka tirsanahay Boobe Yuusuf Ducaale. Toloow maxaa soo kordhay ayaan anigu is weydiiyey? Oo miyaan garan karaa waxa soo kordhay ee wasiirku ii doonayo? Jawaabtu waa maya. Markaa dabadeed waxaan go’aansaday in aan wasiirka dib uwaco, si uu markaas iigu sheego waxa jira ee uu ii doonayey. Balse intii aanan garaacin numbarkii wasiirka ayaa waxa si deg deg ah maskaxdayda ugu soo dhacday, bal in aan eego sadexda jeer ee uu I soo wacay wakhtiyada ay kala ahaayee. Waxaan arkay in uu sadexda jeer laba ka mid ah I soo wacay saacadu markay ahayd 7:24am. Marka sadexaadna uu I soo garaacay 7:53 daqiiqo. Markaas ka bacdi waxaan dib u garaacay numbarkii wasiirka, mase helin oo markiiba system-kii telefoonka ayaa ila hadlay oo igu yidhi “numbarka aad